အဆိပ်ထုတ်ထားတဲ့ အိမ်မွေး အလှမြွေလေးတွေ တရုတ်ပြည်မကြီးကတဆင့် ထပ်မံရောက်ရှိလာ – MMPost
ဖြစ်ရပ်မှန် October 24, 2017
အဆိပ်ထုတ်ထားတဲ့ အိမ်မွေး အလှမြွေလေးတွေ ထပ်ဝင်ပါပြီနော်…
တရုတ်ပြည်မကြီးက ကိုယ်တိုင် တင်သွင်းတာပါ…
အရင်တစ်ခေါက် ပစ္စည်းပြတ်သွားလို့ Order တင်ထားတဲ့သူတွေ စာရင်းပြန်ပေးပါရှင့်…
သားသားမီးမီးလေးတွေနဲ့ အတူဆော့ကစားရင်လည်း ပြသနာမရှိလို့ လူကြိုက်အလွန်များနေတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေပါ…
အစာကျွေးဖို့ကတော့ ကြက်ဥ အမဲသားနဲ့ နွားနို့ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့သုံးကြိမ် ကျွေးနိုင်ပါတယ်…
သတိပြုရမှာက ဒီကလေးလေးတွေကို ခြောက်လ တစ်ကြိမ် ဆိုင်မှာ အဆ်ိပ်လာထုတ် ပေးရမှာပါ…
မျိုးယူချင်ရင် ဆိုင်က အဖိုနဲ့ သတ်မှတ်နှုန်းအတိုင်း စီစဉ်ပေးမှာပါ…
မြေအကြီးကြီးတွေ ထွက်လာရင် တာဝန်မယူပါဘူး…
ဆိုင်မှာဆိုရင်တော့ တစ်ခါတည်း ဓာတ်ပြောင်းပေးမှာပါ…
ကြာလာလေလေ လူတွေနဲ့ ယဉ်ပါးလေလေ ဖြစ်ပြီး အရမ်းချစ်စရာ ကောင်းပါတယ်…
ခန္ဓာကိုယ် မကြီးထွားအောင် ဓာတ်ခွဲပြုပြင်ထားလို့ အသက်ကြီးလာပေမယ့် အရွယ်မပြောင်းတဲ့ ချစ်စရာ့ မြွေပေါက်မလေးတွေပါ…
ဖုန်းနံပါတ် – 09402503241 ကို ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်နော်…
ပစ္စည်းအမြန်ပြတ်တတ်တာမို့ စောစောမှာထားဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်…
အောက်မှာတစ်ပုံချင်းစီ ဈေးနှုန်းနဲ့ အမျိုးအစားကို ရှင်းပြပေးထားပါတယ်နော်…
Credit: Shoon Mi Mi Htet
အိမ်မှာ လျပ်စစ်မီးမရှိလို့ ဘူတာရုံကို ခြေဗလာလမ်းလျှောက်သွားပြီး စာကျက်ရသည့် ကောင်မလေး
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဥတ္တရာပရာဒေ့ရ်ှပြည်နယ် မှကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ ရွာမှာ လျှပ်စစ်မီးမရှိလို့ လျှပ်စစ်မီးရနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသော နေရာဖြစ်သည့် ဘူတာရုံကို ညတိုင်း ဖိနပ်မပါဘဲ လမ်းလျှောက်သွားပြီး စာကျက်နေ ရပါသတဲ့။ ပညာရေးသည် ခိုးယူလို့မရ၊ ပျောက်လဲမပျောက်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ ခက်တာက လွယ်လွယ်ကူကူလဲ မရရှိနိုင်ပြန်ပါဘူး။ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာတော့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုက ပညာလိုချင်သည့်ကလေးများအတွက် အဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ အခမဲ့ပညာသင်ပေးသည့်ကျောင်းတွေရှိပေမယ့်လို့. …
မေလင်း October 25, 2017
ဒါတွေ တကယ် ရောင်းနေတာလား ???????
တကယ် ရောင်းနေတာဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာက လုံးဝ ခွင့်မပြုသင့်ပါဘူး ။
တရားဝင် လိုင်စင် ရတယ် လို့ ပြောထးပါတယ် ။
ဒီလို အဆိပ်ရှိမြွေမျိုးကို ဘယ်လိုပဲ အဆိပ်ထုတ် ရောင်းစေဦးတော့ လိုင်စင် ကို ဘယ်လို စီစစ်ပြိး ခွင့်ပြုပေးတယ် ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ကို မရပါ။
ဒါဆိုရင် မြွေပွေး မြွေဟောက်တွေကို အဆိပ်ထုတ်ထားတယ် ပြောပြီး အိမ်မွေးဖို့ ရောင်းရင် ခွင့်ပြုမှာလား။
မြွေ ဆိုတာ အဆိပ် ဘယ်လို ပဲ ထုတ်ထုတ် သူ့ သဘာဝ အရ
အဆိပ်အိတ်ထဲမှာ အဆိပ်က ပြန်ပြည့်လာမှာပဲ ဖြစ်တယ်လေ ။
ဘာကြောင့် မကြောက်မရွံ့ ရောင်းချနေကြတာလဲ ။
ပြီးတော့ ၆လ တကြိမ် ဆိုင်မှာ အဆိပ် ပြန်လာထုတ်ပါလို့ ပြောထားတယ်
ဒါဟာ အဆိပ်က တခါထဲ ပျောက်ကွယ်သွားတာ မဟုတ်ဖူးဆိုတာ သက်သေပေါ့။ အကြောင်းကြောင်း ကြောင့် ဝယ်တဲ့ဆိုင်မှာ အဆိပ်ကို လာပြန် မထုတ် နိုင်ခဲ့သော် ဒီမြွေကို မွေးထားမိတဲ့ အိမ်က လူတွေရဲ့ အသက်အန္တရယ် သည် အင်မတန် risk များပါတယ် လုံးဝ အားမပေးပါ ရှုတ်ချပါသည်။ ၄င်း အိမ်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အိမ်များကပါ အန္တရယ် ရှိနိုင်ပါသည်။ ကလေးရှိတဲ့အိမ်ဆိုလျှင် ပို၍ အန္တရယ်များပါသည်။
လူကြီး မျက်ကွယ်မှာ ဒီမြွေကြောင့် ကလေး တခုခု ဖြစ်လျှင် မည်သူ တာဝန်ယူမည်လဲ ။ ကလေးဆိုတာ ဘာမှ နားမလည်။ တွေ့ရာ ကောက်ပြီး ပါးစပ်ထဲ ထည့်နေတာ။ ဘာမှ မဖြစ်ရင် ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် တခုခု ဖြစ်လာခါမှ ကယ်ပါဦး ဆိုလို့ အချိန်နှောင်းပါလိမ့်မည် ။
ကိုယ့်ဘာသာ မလုပ်ရပါဘူးနော်… မြေအကြီးကြီးတွေ ထွက်လာရင် တာဝန်မယူပါဘူး…လို့လည်း ပြောထားပါသေးတယ်။ ဒါဟာ အန္တရယ်နဲ့ လက်တကမ်းမှာ ရှိနေတာ မဟုတ်ဖူးလား ။ ကိုယ်တိုင် အကြံတခုခု ဖြင့်သော်၎င်း ။ မတော်တဆ မြွေအကြီးကြီးတွေ ထွက်လာခဲ့ရင်ကော။
သက်ဆိုင်ရာမှ လိုအပ်သလို အမြန်ဆုံး အရေးယူပေးပါရန် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။